Kuyinto imfihlo ukuthi England - lapho kudabuka khona ibhola. Kulapha ezinye amakilabhu eziqine kakhulu emhlabeni. Kuyaphawuleka ukuthi ingqondo enhloko-dolobha yezwe kuphezulu kakhulu. Ngokwesibonelo, nazi amathathu club kusekelwe, okuyinto njalo ulwela ubuqhawe, kanye ukudlala ezingeni eliphezulu ukuncintisana European.
Sekukonke, eLondon kukhona amaqembu professional engaphezu kweyishumi ziqhubeka. Ezinye zazo adlala e-Premier League namanye Izilimi alwa ku ezingeni leliphasi. club ngamunye has umlando walo, okungaba ezithakazelisayo ukuze abalandeli of the mdlalo. Kulesi sihloko sibheka lezi football club of London, bafanelwe ukunakwa kakhulu.
"Chelsea" - ngomunye wabokuqala
Njengoba ngishilo ngenhla, enhloko-dolobha i-English eziningi amaqembu professional enamandla. Ibhola amakilabhu e-London namuhla iholwa, ngaphandle kokungabaza, "Chelsea". It yadalwa ngo-1905, kodwa isikhathi eside akakwazanga ukufeza zempumelelo.
Ngemva engamashumi amahlanu kuphela ngemva "Chelsea" isizinda wayinqoba indondo yakhe yokuqala. Futhi kwaba omunye ambalwa kuyo yonke imisebenzi yakhe. A esiteji amasha kumlando club kwaqala ngo-2003 lapho eyathengwa ngu Billionaire Russian Roman Abramovich. Bachitha izimali ezishisiwe bethenga ekubuyiselweni nokuvuselela iqembu.
Ngenxa yalokho, i-club unqobile kathathu Championship of England, izikhathi eziyisithupha Cup, futhi kulo mqhudelwano yodumo European - Champions League. Ngesizini edlule, "Chelsea" futhi iwine isicoco eliphakeme, futhi ufakazela ukuthi best football club eLondon elinye lamaqembu esiqine eNgilandi.
"Arsenal" nokufeza yakhe
Eyesibili ezibaluleke kakhulu football club e London "Arsenal", elinomlando acebile kakhulu ukwedlula "Chelsea". Uye iwine lenqwaba Trophies ekuqaleni kanye ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule.
Inani Eliphakeme zemidlalo impumelelo iqembu kwaba phakathi nale minyaka eyishumi edlule, lapho zokugcina won FA Cup ngisho waphuma e-Champions League sokugcina.
Nokho, kusukela ngaleso sikhathi club ziyawohloka. Kuze kube manje, kwakungekho umdlali owayenganikela zaba imboni ebaluleke ngokwengeziwe ukuze ithimba kuka Thierry Henry, ubani kule minyaka eyishumi eyedlule kwaba scorer yeqembu phezulu emlandweni walo.
Muva nje, "Arsenal" wakwazi ukunqoba le FA Cup, kodwa ubuqhawe wezwe, akalokothi unikeza. Wayevame ithatha ingxenye Champions League, kodwa iqedwe kuleli esigabeni sokuqala playoffs.
Uma sikhuluma ezibaluleke kakhulu football club Premier League BakaJehova owawuseLondon, akunakwenzeka kokukhumbula "Tottenham". Manje njalo kuphazanyiswa abaholi ubuqhawe futhi silwele ezikhundleni eziphezulu. Kodwa njengoba 'Arsenal "lize ngeke baphumelele.
Inani eliphakeme labamemezeli ngempumelelo yakhe ewela sixties of XX leminyaka., Uma wayinqoba Championship naseNgilandi, futhi Cup, futhi kwaba winner lokuqala indondo European emlandweni football ngesiNgisi. Ngeshwa, ithimba alikho isesimweni esihle, kodwa usaqhubeka ukudlala ezingeni eliphezulu minyaka iqhaza emncintiswaneni European.
Okunye London amakilabhu
Ngakho sabuka amaqembu phezulu enhlokodolobha yase-Great Britain. Kodwa ngokuqinisekile Akuwona kuphela. Manje uyazi ukuthi football club kakhulu e-London ukhona namuhla.
It kuvela, impela eningi kubo - amaningi njengoba nanhlanu. Yiqiniso, sikhuluma amaqembu professional edlala Izilimi ezingeni. Uhlu football club e-London, ungaqala nge "Fulham", okuyinto omdala enhloko-dolobha. It yasungulwa ngo-1879.
"Watford" futhi "Leyton Orient" - nayo amakilabhu London waqala cishe ngesikhathi esifanayo, kodwa bobabili zidlala Izilimi aphansi njengoba "Rangers Queens Park" futhi "Millwall". Okokuqala ngezikhathi liphuma e-Premier League futhi muva nje liye hit Championship, okungukuthi phiko lesibili level.
"Barnet", "Brentford" futhi "Charleston" - ezintathu the club, abasemakhaya London. Babusekelwe isikhathi eside, kodwa ungalokothi wavusa ngisho e-Premier League. Enye into - the "West Ham" futhi "Crystal Palace." I club sokuqala yilungu lesikhathi esigcwele phiko ezinkulu yesibili ngezikhathi uthola khona.
Kodwa ukuze uqedele kulolu hlu kuwufanele amaqembu amabili amajuba, okuyinto Yiqiniso, namanje kude phambili, kodwa bafanelwe inhlonipho ukukwazi ifike ezingeni okhokhelwayo. Yiqiniso, ukukhuluma "Dagenham" The club, eyasungulwa ngo-1992, futhi "Wimbledon." Lesi sakamuva, ngenhlanhla, usemncane kakhulu. It yasungulwa muva nje - ngo-2002.
Tim Howard nezinto ezithakazelisayo kakhulu mayelana unozinti abadumile
Footballer Teddy Sheringham
Ifomu ukupheka amaqanda ngaphandle igobolondo: izinzuzo kanye nezici yokusetshenziswa
Ingubo Fashion ehlobo ngoba abesifazane okhuluphele
Bilingual - it is ungubani na? Uba kanjani indoda nesibhamu kahle izilimi ezimbili?
Uhlolojikelele izikhulumi ephathekayo: ukukhetha model umhlabeleli engenantambo
Anti-inflammatory kanye analgesic "Nemuleks": yokusetshenziswa
Lapho womama ushiye? Isikhathi esincane